‘गैरकानुनी काम गर्ने एजेन्टलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ – Sourya Online
‘गैरकानुनी काम गर्ने एजेन्टलाई कारबाही गर्नुपर्छ’
सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २३ गते ०:२७ मा प्रकाशित
दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका राजदूत कमानसिंह लामाले त्यहाा कार्यरत नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । २२ हजार नेपाली रहेको कोरियामा कामदारको अवस्था सुर्धान आफू प्रयत्नसिल रहेको उनी बताउाछन् । काभ्रेको मादनकुडारी गाविसमा जन्मिएका राजदूत लामासाग कोरियामा नेपाली कामदारको अवस्था र भविष्यबारे गरिएको कुराकानी :
दक्षिण कोरियाको राजदूत भएर गएपछि नेपालीको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
कतार, मलेसिया आदि देशमा गएका कामदारको भन्दा राम्रो छ तर गुनासोरहित भने छैन ।
नेपाली कामदारका समस्या के पाउनुभयो त ?
विशेषत: नेपाली कानुन र कोरियाको कानुनबीचको भिन्नताका कारण उब्जिएका समस्या छन् । काम लगाउनेको स्वार्थ र काम गर्नेको टकरावका कारण पनि धेरै समस्या उब्जेका छन् । जाली, फटाहा, दलालको उक्साहटमा समस्याको भुँमरीमा फस्नेको समस्या छ ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ ?
राम्रो परामर्श सेवा दिएर मात्र कामदार पठाउनुपर्छ र गैरकानुनी काम गर्ने एजेन्ट सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
तपाईंले के गरिरहनुभएको छ त ?
राजदूत भएर आएपछि मैले गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्दै आएको छु । सबैका समस्या सुनेर समाधानका लागि मेरो प्रयास जहिले पनि हुन्छ । अर्कोतिर नेपालमा रहेको लोडसेडिङ समस्या समाधानका लागि कोरियाका तर्फबाट विद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरणका लागि पनि मैले प्रयास गरिरेहेको छु । त्यसका लागि मैले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न लागेको छु ।
राजदूतावासले नेपालीको समस्या समाधानका लागि बेवास्ता गरेको आरोप छ नि ?
राजदूतावासले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने सबै समस्या समाधान गरिएका छन् । राजदूतावासमा दर्ता भएका सबै उजुरी र निवेदन किराना लगाएका छौँ । एउटा पनि बाँकी छैनन् ।
नेपाली कामदारले दु:ख पाउनुका पछाडि के कारण हुन सक्छन् ?
प्रश्न अलि बृहत् भयो । सबै कामदारले दु:ख पाएका छैनन् । कामदार पठाउने र जानेले केका लागि पठाएका हुन्, कस्तो काम, कति तलब हुन्छ, त्यहाँको कानुनअनुसार के गर्न पाइन्छजस्ता कुरामा चेतना अभिमुखीकरण नगरी आउँदा केही समस्या देखिएको हो ।
गल्ती गर्ने एजेन्टलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्ला ?
एक त गैरकानुनी रूपमा जानु भनेको दु:ख बेसाउन नै जानु हो । त्यसैले गैरकानुनी रूपमा जानु भएन नि । गैरकानुनी रूपमा कामदार पठाउनेमाथि सरकारलाई सहयोग गरेर कारबाही गराउनुपर्छ ।
कोरियामा कति नेपाली कामदार छन् र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
कोरियामा २२ हजार नेपाली छन् । कति साहुको ऋण तिर्नका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन् । कतिले त त्यो सपना पूरा गर्न नसक्दा आफूले आफँैलाई मारिरहेका पनि छन् ।
कोरिया जाने नेपालीलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
राम्ररी बुझेर मात्रै विदेश जानेहोस् । अरूको बहकाइमा नलाग्नुहोस् । दु:ख पाए तपाईंले पाउने हो, पठाउनेले पाउने होइन । आफ्नो देशमा जति आत्मसम्मान अरू कहीँ पाइँदैन । तर पनि परिश्रम गर्नेलाई कोरिया राम्रो गन्तव्य हो ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा कामदारको खााचो भएको अवस्थालाई सम्झाउादा तपाईंलाई कस्तो अनुभुति हुन्छ ?
त्यो बुद्धि सम्झँदा आफैँलाई आकाशतिर फर्केर थुक्न मन लाग्छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भनेजस्तो सबै मिलेर संविधान पनि बनाउन सकेनाँै । एउटा प्लेनसमेत किन्न नसक्ने हाम्रो अवस्था त झन दयनीय छ । नेपाली परिश्रमी छन् तर त्यो श्रम नेपालकै लागि लगाउने चाँजोपाजोको आवश्यकता छ ।
बिदेसिने क्रम कसरी घट्न सक्ला त ?
नेपालले १६ प्रतिशत शिक्षामा बजेट खर्चेको छ । त्यसबाट उत्पादित कारिन्दा नेपाललाई आवश्यक छैन । नेपालका अधिकांश कलेज, स्कुल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसारको रोजगारमूलक शिक्षाको लागू गर्न सकिएको छैन । स्वरोजगारमूलक वातावरणको आवश्यता पर्छ । अनि मात्र बिदेसिने नेपालीको संख्या घट्न सक्छ ।
कोरियनसँग कागजी विवाह गर्ने अधिकांश महिला विचल्लीमा छन् भनिन्छ नि हो ?
पेपर म्यारिज गरेर बिचल्लीमा परेका महिला मात्र होइन, गैरकानुनी रूपमा बसेका अन्य नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउनका लागि दूतावासले प्रयास गरिरहेको छ । ट्राभेल डकुमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई स्वदेश फकाइरहेका पनि छाँै । गैरकानुनी रूपमा बसेकालाई कानुनी रूपमा बसेसरह इज्जत दिलाउन त दूतावासले सकेको छैन, सक्दैन पनि होला । तर, उनीहरूलाई कानुन बनाएर स्वदेश फर्काउनका लागि क्रियाशील छ ।
रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत कामदार पठाउनेमा नेपाल कोरियामा उत्कृष्ट छ होइन ?
राम्रो काम गर्नेले उत्कृष्ट बनाएका हुन् । गलत काम गर्नेले नेपालको इज्जत धमिल्याएका छन् ।
के कारणले नेपाल उत्कृष्ट भएको होला ?
काम राम्रो गर्ने र तुलनात्मक रूपमा अरू देशका कामदारभन्दा हाम्रा कामदार अनुशासित भएकाले उत्कृष्ट भएका हुन् ।
कोरियामा नेपाली कामदारको माग किन बढेको होला ?
धैरै कोरियनले थ्रिडी काम नरुचाएकाले विदेशी कामदारको माग बढेको हो । अहिले १५ हजार नेपालीले भाषा परीक्षा पास गरेका छन् । तिनलाई कोरिया पठाएपछि मात्र फेरि भाषा परीक्षा कोरियाले लिनेछ । अहिले कटौती गरेको होइन तर हामीले लापरबाही गर्‍यौँ भने कोटा कटौती हुन सक्छ । यो वर्ष सात हजार जति नेपाली इपिएसअन्तर्गत कोरिया आउँदैछन् ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले नेपाली कामदारलाई कस्तो असर पारेको छ ?
अहिले कोरिया आएका नेपालीको उमेर देख्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा जन्मे, त्यसैका बीच हुर्के, अस्थिरताबीच बिदेसिए, उनीहरूले कहिले स्थायित्व देख्न पाएका छन् र ? स्थायित्व हुनु र नहुनुमा त फरक पर्छ नि किन नपर्नु ।
नेपालको भविष्य उज्वल बनाउन के गर्नुपर्ला ?
नयाँ ठाउँमा नयाँ अनुभुति हुन्छ नै । मैले संसदीय सुनुवाइका बेलामा कम्तीमा चार सय मेगावाट जलविद्युत् लगानी भित्र्याएर लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोसिस गर्छु भनेको थिएँ, यसका लागि सक्रिय छु । बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर नेपालको भविष्य उज्वल पार्न कोसिस गर्छु ।
प्रस्तुति : भीम गौतम